Lesi sikole ubhekwa izikhathi ezingcono kakhulu ekuphileni kwami. Lokhu akusona isimanga - kulapha lapho ingane ekhula futhi isingumuntu omdala.
isikhathi School ugcwele izinto ezahlukene - kokubili esidabukisayo futhi funny. Ngo wodwana kuzomele sifake ukuqaliswa imisebenzi ehlukahlukene ukuthi ucelwa esikoleni. Munye walemisebenti obujwayelekile ukubhala Tindzaba.
Lona akuwona neze umsebenzi olula ngoba ingane noma osemusha isiphi isigaba. Ngenxa sizama ukuqonda izimiso yokubhala umsebenzi, usebenzisa umsebenzi-agumenti ngendaba kwawena.
Sakha indawo yokusebenza
Njengoba sikhethe isihloko zefilosofi ngokwanele, bese umfundi ngeke kudingeke yimuphi izincwadi ekhethekile noma ulwazi ewumngcingo ngesihloko. Ukuze ubhale ngaso indaba-agumenti ku "Self-imfundo" kudingeka kuphela akwazi ukukhuluma ngokukhalipha nokuveza abakucabangayo.
Ngaphezu umsebenzi more wagcwalisa, ungasebenzisa izingcaphuno zefilosofi ahlukahlukene, ababhali bemidlalo nabalobi ngale ndaba. Futhi, uma isihloko ekhethwe njengedifolthi ukusebenza ukuze Oge, ingane uzodinga ukuletha amazwi akhe agumenti, futhi lokhu kuyadingeka ukwazi imisebenzi emayelana nesihloko self-imfundo.
Imisebenzi enjalo ingase ibe "Oblomov" Goncharova, "Impi Nokuthula" Tolstoy, "I epholile Don" Sholohova mina T. D.
Ukubhala uhlelo umsebenzi emabanga 5-8
Ukuze ubhale ngaso indaba-agumenti ku "Self-imfundo" kubalulekile ukuhlela kusengaphambili. It kungaba kuqukathe ezihlukahlukene izinto. Uma ngabe indzabambhalo kulotshiwe 5-8 ekilasini ingane, kungaba isakhiwo kahle elula:
Isingeniso. Le ngxenye, sikhokha cishe 2-4 iziphakamiso, okuyinto wamisa umqondo oluyisisekelo umbhalo. Ngokwesibonelo: "Ukuziphakamisa imfundo - kuyingxenye ebalulekile ingane ekhula, ukwakheka ubuntu bakhe. Self-imfundo kuyadingeka ukuze ukuba singenzi amaphutha bedle yizici zemvelo. "
The main ingxenye. Umvuthwandaba umbhalo yiyona voluminous kakhulu, futhi lapha umsebenzi ingane esiphezulu ukuvulwa indaba ephathwayo. "Wonke umuntu waziphatha self-imfundo ngezindlela ezihlukahlukene. Othile okwamanje isimiso sansuku zonke futhi kahle kufanele umuntu olwisana zokwesaba yabo futhi ukwesaba umuntu umane uzama ukuba singenzi amaphutha futhi ungahambi ngoba izilingo ezingabazisayo. "
Isiphetho. Le ngxenye ivolumu uyalingana entry. Lapha umfundi kuletha esiphethweni lamazwi akhe, abese ephetha. "Ngikholwa ukuthi wonke umuntu kufanele bakwenze self-imfundo. Phela, uma ungenzi lokhu, umhlaba ubuyoba nezinxushunxushu. "
Kodwa isakhiwo esilula enjalo isebenza kuphela emakilasini aphansi secondary. Ukuze nabafundi basesikoleni esiphakeme umsebenzi Kuthi ezahlukene.
Esikhathini grade 9 ngokuvamile babhale indzaba-agumenti ku "Self-imfundo." Oge - isivivinyo elizotholwa ngamunye lesishiyagalombili ngoba umfundi kumele akwazi ukuba babhale indaba njengakho konke nenqubo ye-Oge.
Kulokhu, izinguquko kuphela isidingo ukuletha ezimbili agumenti yombhalo noma izincwadi. Kanjani ngeke ke ngifane uhlelo?
Isingeniso. Lapha ingane eveza umcondvo lobalulekile umbhalo, lapho ebhala indaba.
The main ingxenye. Lapha kukhona umbono we umfundi, kanye efanayo labo zimpikiswano ezimbili ukuthi izoqinisekisa amazwi examinee.
Isiphetho kuyafana - kuba kwaqedwa imisebenzi nemicabango.
Kodwa abafundi basesikoleni esiphakeme ukuba babhale indaba-agumenti ku "Self-imfundo" kuyoba nzima kakhulu, ngoba nenqubo kokuhlaziywa kulokhu kakhulu kancane.
Ukuze uqalise umfundi ukubhala isingeniso esifushane mayelana nale ndaba. Okulandelayo umbhalo yencazelo yenkinga. Examinee kuyadingeka ukugqamisa umcondvo lomcoka endzabeni kanye nezinkinga umbhalo kanye ukuyibeka ngamazwi akho.
Isinyathelo esilandelayo - ubeke amazwana inkinga. Umfundi kufanele kwakuthiwa ukuchaza inkinga futhi kungenzeka okuchaza.
umbono kombhali. Leli phuzu ulula, ngoba umfundi akudingeki kuphela fingqa isikhundla nombhali embhalweni.
isikhundla Siqu - okwamanje umntwana kufanele baveze isimo sabo sengqondo inkinga.
Okulandelayo agumenti - imiphumela umfundi e Isibonelo 2, omunye okufanele ngempela lisuswe izincwadi. Isibonelo sesibili kungenziwa ebhaliwe evela isipiliyoni sami siqu yomlando noma abezindaba.
Kuyinto leli cebo, kumelwe babhale indzaba-agumenti ku "Self-imfundo." Izici yalo msebenzi itholakala lokuthi ukuthi, ngokungafani amacebo amakilasi maphakathi kanye aphansi, isakhiwo okumele ilandelwe ngokunembile hhayi kuwo.
Ake sibheke izinto ezimbalwa ngokwehlukile.
Ukujoyina inkinga futhi amazwana
Kusukela entry uqobo kanye nezindaba iyafana encazelweni komunye nomunye, bese omunye ungakwazi uqhubekele esilandelayo.
"Kuyini imfundo empilweni yomuntu? Ingabe kwanele ukuthi kufanele abeke abazali? Ngicabanga ukuthi akunjalo. Kukhona into ezifana self-imfundo, abe umuntu omkhulu, ngaphandle lokhu akunakwenzeka. Self-imfundo - akuwona neze umsebenzi olula emphilweni wonke umuntu. Namuhla, ukuziphatha umphakathi buboke uwile kakhulu uma kuqhathaniswa nawo wonke la mashumi langaphambilini, futhi lokhu kuyinkinga enkulu ngoba abantu bonke. "
Njengase 2 iziphakamiso yehlulekile adalule imisebenzi amaphuzu amathathu.
Umbono wombhali kanye nesikhundla somuntu siqu
Indzaba-agumenti ku "Self-imfundo" akudingi nje kuphela inkulumo ka ukubukwa nombhali, kodwa futhi kuhilela ukusho isikhundla siqu umfundi.
Njengoba imibono yombhali ucishe ecacile, ujike ilungelo yombono womuntu siqu. Yini ngidinga ukubhala lapha?
Ungaya ngendlela elula - ekuphikiseni ukubukwa nombhali, noma ukuba avumelane naye. Uma examinee bazokwazi ukuthola ama-agumenti ngakwesokudla nalowo nakulona omunye umbono, lapho ungakhetha phi of them.
Futhi, umfundi angaya enye indlela futhi ukuveza imibono yabo siqu, okuyinto awuhambisani ngokugcwele isikhundla umbhali, kodwa ngeke ukuphikisana nawo.
Izimpikiswano kanye nesiphetho
Ukuze ubhale ngaso indaba-agumenti ku "Self-imfundo" enokungqubuzana, kumele ube ujwayelene imisebenzi izincwadi Russian. Ngoba ngaphambi leli phuzu ngakho kakhulu sincike agumenti. Uma unquma ekuphikiseni ukubukwa nombhali, kumelwe bakwazi ngokuphumelelayo ukunikeza agumenti ezincwadini. Ngokwesibonelo:
"Ngicabanga self-imfundo iyingxenye ebalulekile ekwakhekeni indoda njengomuntu ngamunye. Isibonelo omubi engase ibe umkhiqizo ofanayo Oblomov Goncharov. Oblomov - umuntu ngokuphelele ababuthakathaka, nginenhliziyo angakwazi amanga izinsuku phezu kombhede futhi wenze lutho, ungenayo i umbono nhlobo futhi ayizange izame ngisho nokuzama ukuba kancane abafundile. Lesi yisibonelo wangempela yokuntula ukuzithiba imfundo. "
Lapha ngaleyo ndlela ezibhalwe indzaba-agumenti ku "Self-imfundo." Into ebaluleke kakhulu kulo msebenzi - ukwenza umsebenzi uhlelo oluyilo bese uzama ukulilandela ngangokunokwenzeka, bese zonke Kumelwe aphume kakhulu.
Bondzaweni, tihlanganisi, izinhlayiya: Sipelingi
"Volkovskaya" esiteshini (ongaphansi komhlaba): ama-iri wokusebenza zokungcebeleka izindawo eziseduze
Amakhambi kuthebula lakho. Cilantro: inzuzo kanye nokulimala, ikhalori kanye neminye imininingwane mayelana nomkhiqizo